Free na Mepee Software: Mmetụta Teknụzụ na Ndị Nhazi | Site na Linux
Ojiji nke Free na Open Software na-eto eto, ma ọ bụghị naanị n’etiti ndị mmadụ na ndị nwere ịnụ ọkụ n’obi, ndị hụrụ teknụzụ n’anya, n’etiti ndị ọzọ, kamakwa n’etiti Ọha na Ọha, yana n’etiti Nkuzi Ọzụzụ na Sayensị.
Ihe a niile n'ọtụtụ dị ukwuu n'ihi ọchịchọ nke pụtaworo dị ka ihe na-emekarị n'etiti nzukọ site na mbenata ọnụahịa na ngwaahịa, ikikere na ọrụ enyere aka na azụmaahịa, ngwaahịa na ngwaahịa mechiri emechi, na mgbakwunye na irite uru ọhụụ nke ihe akpọrọ "Cloud" ma nwekwa ike ịmegharị ma gbanwee onwe ya na ntanetị.
1.2 Mkpa nke Free na Open Software na Ọgbakọ
1.3 Ngwọta dịnụ dabere na Sọftụwia Na-emeghe na Open
1.3.1 Otu sava
Taa ọ bụ ihe kwere nghọta na Ojiji nke Ngwa, Sistemụ na Ngwọta dabere na Free na Open Software na-akwado ma belata ọnụahịa ntinye na usoro ọhụụ na ụwa nke akụ na ụba dijitalụ., yana onyinye nke Free Software Communities site na mmepe ohuru na-enyere ndị na-ahazi aka ịnabata mgbanwe dijitalụ n'ụzọ dị mfe karị.
Mgbe Community na Open Community na-agbasa, na-ekere òkè ma na-emekọ ihe ọnụ, ọ na-emepụta netwọkụ nke ahụmịhe, bara oke uru ma na-arụpụta., nke yiri nkebi nke Middle Ages of Humanity mgbe ndị ikom Renaissance kesara ihe okike ha, nchọta ha, nyocha ha na ihe ndị ha mepụtara, na-eme ka anyị bụrụ ndị mmadụ, ndị na-emepụta ihe ma na-arụpụta ihe.
Ya mere, ọ bụghị ihe nzuzo nye onye ọ bụla na taa, na Free na Open Software na-enyere ndị otu aka ịnyagharịa na ịga n'ihu n'okporo ụzọ na mgbanwe dijitalụ, ịzaghachi n'ụzọ dị nro na nke dị irè iji na-arịwanye elu ma na-achọ ngwa ngwa nke azụmahịa ahụ.
Mkpa nke Free na Open Software na Ọgbakọ
Ihe omume Sọftụwia na Open na sistemụ na-eweta arụmọrụ dị mkpa, mgbanwe na nchekwa na ọnụ ala iji nweta mgbanwe a na-akpọ mgbanwe dijitalụ, na-eburu n'uche na ihe kpatara nke a bụ n'ihi nnukwu ọdịiche dị n'etiti ọdịbendị na nkà ihe ọmụma nke Free na Open Software na Nkeonwe na Software mechiri emechi, ya bụ, na usoro mmepe obodo, n'ihi na site na ebe ahụ ka ihe ohuru.
Ndị na-ahazi na taa na n'ọdịnihu ga-enwe uru ahịa dị elu ga-abụ ndị nwere "akụ dijitalụ" kachasị mma. Nke ahụ bụ, mmemme, sistemụ, na nyiwe ka mma nke nwere ike inye ndị na-azụ ha ihe ngwangwa ma dị ire n'etiti mmụba a na-eto eto na mmepe azụmaahịa na teknụzụ, nke ime na nke ụwa niile, iji nweta asọmpi asọmpi ma nweta ọganiihu nhazi. .
Ebumnuche nke anytù ọ bụla dị ugbu a bụ na ọ ga-abụrịrị onye isi na usoro nke ijikọ ma melite akụ dijitalụ ha ka ha nwee asọmpi., ma nye ndi oru ya / ndi oru ya na ndi amaala ya oru ndi ozo. Nke a bụ, karịa ihe niile, ihu mgbanwe ndị a na-akpọ mgbanwe dijitalụ nke oge a chọrọ.
Karịsịa Free na Open Software na Research na Education, Telecommunications, Banking, Health na Public Management ụlọ ọrụ, nwere ọtụtụ ihe inye aka n'usoro nke ntụkwasị obi, agile na agbanwe agbanwe maka ụdị na nha niile nke nzukọ.
Ma na-atụle ogologo usoro mmejuputa nke nwere ike ime n'ihi mgbanwe ọdịbendị na teknụzụ nke ahụ chọrọ usoro mgbanwe dijitalụ nke dabere na mgbanwe site na Onwe ya na nke Emechiri Emechi na Nweta Software na Mepee.
Ngwọta ndị dịnụ dabere na Free na Mepee Software
Enwere ike iji sọftụwia na Open Software n'ọtụtụ ebe nke otu nzukọ, nke anyị ga-ekwupụta naanị ụfọdụ mpaghara na ụfọdụ ihe atụ nke ojiji na / ma ọ bụ Ngwa bara uru na ha.
Ozi: zipu ozi, postfix, qmail, exim, onye ozi, zimbra, poen-xchanges, kolab, citadel
Ihe ndekọ: samba
DNS: kee agbụ
NSF: nfs-kernel-ihe nkesa
FTP: proftpd, vsftpd, dị ọcha
LDAP: Openldap, apacheds, opendj, 389 ndekọ ndekọ
Onye nnọchiteanya: skwid, dansguardians
Ọkụ: Uchechi, mondialld, endian, pfsense
IPS / NJ: nkwo, meerkat, bro, kismet, ossec, tripwire, samhain, onye enyemaka
Data: akwụkwọ akụkọ, mariadb
IP ekwentị: akara mmuke, vitalpbx, issabel, elastix, freepbx
Nchịkọta akwụkwọ: alfresco, oghe oghe
Nchịkwa azụmahịa: odoo, opencrm
Nlekota oru: nagios, cacti, zenoss, zabbix
Nkwado: glpi, okpu
Ihe mkpuchi: foogu oru ngo
Ozi ozi: gammu, gajim, jabber,
Nkesa GNU / Linux: lee ebe a
Multimedia Edition: lee ebe a
Software mmepe: lee ebe a
Ntụrụndụ: lee ebe a
Ngwa Office na nke gara aga: lee ebe a
Taa, dị ka anyị pụrụ ịhụ mgbe anyị gụsịrị akwụkwọ a, o doro anya na Anytù ọ bụla nwere ike iji ụfọdụ nkwado na nkwado kwado usoro kọmputa dị mkpa nke onwe ya site na iji Software na Open SoftwareN’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, eziokwu a bụ eziokwu dị adị.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ọtụtụ ngwa nke ngwa na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ maka obere na ndị otu na-ajụ, gụnyere Linux Distributions na-agụnye a dum nso nke ngwa iji na azụmahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọha na eze, ọha ma ọ bụ nkeonwe.
Azụmaahịa zuru oke na ngwanrọ na-emeghe n'efu ma na-emeghe ugbu a, ndị na-ahazi onwe ha (Companlọ ọrụ) ma ọ bụ Independent (Obodo) nke na-enye nkwado na mmepe, nke jisiri ike gosipụta akụkọ ịga nke ọma na nnukwu ụlọ ọrụ na gọọmentị ọha na eze, na taa, ihe atụ ndị a nke mmejuputa iwu na ojiji bụ ọkọlọtọ nke na-egosi na ngwanrọ na-emeghe ma na-emeghe bụ ihe dị adị.
Na nkenke, ngwanrọ na-emeghe ma na-emeghe na-enye anyị ohere ịchekwa ụgwọ na ikikere, ma mejuputa usoro ihe omuma nke ihe omuma ihe omuma, nke a na-etinye karia n'okpuru ikikere ngwanrọ na-emechi.
Ihe niile a na-emeghe ụlọ, nke mere ka ọ dịrị ha mfe iji nwayọọ nwayọọ na-enwere onwe ha pụọ ​​n'aka ndị nrụpụta na imeghe uzo nke ahia di uku karia nke ndi ozo ndi ozo iji nweta ngwaahịa na nkwado.
Otu ụbọchị abịala mgbe sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ma mepee emeela ka nkwenkwe ochie ahụ daa na Free na Open Software bụ ihe na-adaba na ọdịda na enweghị nkwado.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Free na Mepee Software: Mmetụta Teknụzụ na Ndị Na-ahazi
Ihe na-adọrọ mmasị ma bụrụ nke ziri ezi dịka mmadụ ga-atụ anya site na Linux Post Install (LPI).
Ghara ịzighachi ihe omimi na post, kwuo na n'ime ụwa zuru oke n'efu na sọftụwia nwere ikike ịkọtara mmadụ dịka ọgwụ si eme (Ana m ekwu okwu nke ọma ka onye ọ bụla ghara ịkọwa m) nke ahụ bụ, ntọala dị mkpa ma dị mkpa ọ gha aghaghi ịbụ nke zuru ụwa ọnụ ma nweere onwe ya yana akụkụ ọzọ nhọrọ nke ịkwụ ụgwọ.
N'ihe atụ a, achọrọ m iji anya nke uche hụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite mmepe nke mmadụ na-enweghị njikọ, enweghị ike ịme ya n'ụzọ ọzọ (dịka emerela kemgbe mmalite nke nghazi) ya bụ, nkwekọrịta ụlọ ọrụ na-agbanwe ngwaahịa ya emechi na ọkọlọtọ site n'eziokwu nke ịnọ ebe niile n'ihi nkwekọrịta ya na ndị nrụpụta na gọọmentị na ụlọ ọrụ.
Dị ka Linux Post Wụnye nke ọma, ihe a na-enweta na nke a bụ ịmepụta ego ọzọ, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị elu ma ọ bụ dị ala, ọbụlagodi nke mmadụ niile chere - ọkachasị n'oge dị mma - gụnyere ịdabere na ụdị ndị ahụ na ngwaahịa ha, ọ bụ ya mere Ha na-enweta otu puku mgbochi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ na ya. N'ụzọ megidere nke ahụ, ọnọdụ ahụ ga-adị iche, sọftụwia kọmpụta sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nke ụlọ ọrụ nwere ike ịnọrọ onwe ha (si otú a nweta nchekwube na nzuzo n'ihi na ha nwere ike ịdabere ma nye aka n'onwe ha), na nke a enweghị ụlọ ọrụ nwere ike ịnapụ ma ọ bụ napụ ha ego. na-emetụta steeti ọ bụla site na ịdabere na ọ nwere ike mepụta na ụlọ ọrụ ụfọdụ, na nke a, IT.
Na nkenke, maka ihe niile Linux Post Install, Free Software bụ ihe ndị ụlọ ọrụ kwesịrị inye ma hụ, yana ebe ọ bụ onye ọrụ na-ahọrọ ma na-akwụ ụgwọ nhọrọ nhọrọ, ọ naghị atụgharị ihe ka ọ bụrụ ụkpụrụ de facto .
Daalụ maka okwu gị, nke n'aka nke ya na-eme ihe n'oge ma mejupụta ọdịnaya ya, ya bụ, mmụta, ojiji na mkpokọta nke sọftụwia efu na GNU / Linux
Nke a bụ nke ọzọ nwere ọdịnaya yiri ya n'otu uche ahụ: https://blog.desdelinux.net/aprender-software-libre-gnu-linux-sin-instalar-nada/